Fiesta de los Patios de Córdoba, ny hatsaran'ny voninkazo amin'ny lohataona | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | Cordova, kolontsaina
Ny festival Patios de Córdoba dia iray amin'ny voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra atao isan-taona any amin'ny faritany Espaniola. Mifandray akaiky amin'ny Primavera, rehefa mahatratra ny fahafenoany farany ny zava-maniry dia nambara fa Fahalianan'ny mpizahatany nasionaly.
Toy ny hoe tsy ampy izany, tamin'ny 2012 dia nahazo koa ny fanavahana ny Lova tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona eo amin'ny sehatry ny kolontsaina ataon'ny UNESCO. Ary izany dia midika hoe fanandratana ny hatsarana voajanahary tanteraka. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny Patios de ianao Cordova, manasa anao izahay hanohy hamaky.
1 Tantara kely amin'ny festival Patios de Córdoba
2 Inona izany?
3 Rahoviana no hankalazana ny Fiesta de los Patios de Córdoba?
4 Mila mandoa fidirana ve ianao?
5 Hetsika fanampiny
6 Ahoana no ahatongavana any Córdoba?
Tantara kely amin'ny festival Patios de Córdoba
Ity festival ity dia niandoha tamin'ny fahakingan-tsaina an'ireo trano Cordovan mahazatra. Ny toetrandro nahavariana tao amin'io faritra io dia nahatonga ny Romana voalohany ary ny Silamo taty aoriana dia nanangana ny tranony manodidina a tokotany afovoany toerana nahitan'izy ireo ny ankamaroan'ny fiainany an-trano.
Na izany aza, ny andiany voalohany amin'ity festival ity dia natao tao 1921. Tsy naverina izany raha tsy enin-taona taty aoriana, fa nanomboka nanjary nalaza tamin'ny 1933, rehefa niditra ny kianja enina ambin'ny folo tamin'ny fifaninanana.
Tapaka tamin'ny ady an-trano dia naverina tamin'ny 1944. Nanomboka teo dia nitombo ny sandan'ny loka, raha nampiana fepetra fanombanana vaovao toy ny karazana voninkazo sy ny jiro voajanahary.
Araka ny nambarantsika, tamin'ny 1980 dia nambarana ho Fetiben'ny Fizahan-tany ho an'ny mpizahatany izy io ary tamin'ny 2012 Heritage of Humanity tsy azo zahana. Amin'izao fotoana izao, ny Fiesta de los Patios de Córdoba no iray amin'ny malaza indrindra amin'ny Andalusia rehetra ary mampivondrona mpitsidika iray tapitrisa mahery mazoto mankafy ny hatsaran'ny voninkazo amin'ny patio.
Patio Cordoba misy haingo amin'ny voninkazo
Araka ny anarany, Fiesta de los Patios de Córdoba dia fifaninanana voninkazo. Ny habaka afovoan'ny trano manan-tantara dia voaravaka mahatalanjona ravaky ny legioma Ny hatsarana lehibe. Ny voaloboka, vilany voninkazo ary firavaka maro hafa dia mamorona ensembles haingo tsara tarehy miorina amin'ny natiora.
Ny faritany lehibe ahafahanao mitsidika an'ireny patio ireny dia ny an'ny Alcazar taloha, izay eo anelanelan'ny Alcázar sy ny fiangonana San Basilio no misy azy; From Santa Marina, manodidina ny Magdalena sy San Lorenzo; ny Mosque; ny Jodia, izay iray amin'ireo tranainy indrindra, ary an'ny Lapan'i Viana. Ireto farany dia mendrika homarihina manokana, satria ao an-dapa ihany dia misy tokontany roa ambin'ny folo samy hafa, samy hafa voaravaka fomba fanao voninkazo.
Etsy ankilany, misy karazana patio roa. Ny sasany manankarena kokoa, an'ny tokantrano tokana ary mazàna izy ireo dia manana rindrina maivana sy rihana vita amin'ny mosaic. Raha ny an'ny hafa, miditra izy ireo tranon'ny mpifanila trano aminy ary mazàna amin'ny gorodona roa izay misy lavarangana amin'ny patio tenany. Ity fampiasa farany ity dia ahafahanao manaingo azy ireo manararaotra kokoa ireo habaka ireo.
Raha misy ifandraisany amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, dia tokony ho fantatrao fa ny mponin'ny trano no mandray anjara amin'ny fifaninanana. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanaingoana ny vala. Misy sokajy roa: tokotanin-drazana ary ny tokotanin'ny fanamboarana maoderina. Saingy afaka misoratra anarana ivelan'ny fifaninanana ihany koa izy ireo, mba hanehoana ny hatsaran'izy ireo amin'ny besinimaro manatrika ny hetsika.
Ny fahombiazan'ny festival Patios de Córdoba eo amin'ireo mponina ao an-tanàna dia hanome anao ny hevitra fa misy trano dimam-polo eo ho eo matetika miditra ao amin'ilay fifaninanana. Ireo dia mazàna ampiana folo na roa ambin'ny folo hafa izay tsy mandray anjara amin'ny fifaninanana.
Niala ho an'ny fety i Patio
Rahoviana no hankalazana ny Fiesta de los Patios de Córdoba?
Araka ny efa nolazainay taminareo, dia lohataona lohataona tokoa ity fialantsasatra ity. Na izany aza, ny andiany farany dia natao tamin'ny fararano. Ny areti-mandringana Covid-19 dia nanery azy io nahemotra hatramin'ny Oktobra, teo anelanelan'ny faha-8 sy faha-18 tamin'io volana io. Na izany aza, raha tsy misy vaovao dia afaka mankafy ny fanontana 2021 ianao amin'ny manaraka swimsuit. Ary ny daty omena ao anatiny dia manomboka amin'ny faha-3 ka hatramin'ny faha-16.
Mila mandoa fidirana ve ianao?
Raha te hankafy ny hatsaran'ny zavamaniry ao amin'ny patio any Córdoba, dia tsy mila mandoa saram-pidirana ianao. Ny fitsidihana dia maimaim-poana, satria ny tombotsoan'ny mpandray anjara dia ny handresy amin'ny fifaninanana, fa koa haneho ny asany haingo.
Na izany na tsy izany dia manoro hevitra anao izahay hitsidika azy ireo miaraka amin'ny mpitari-dalana eo an-toerana. Ity dia hampahafantatra anao amin'ny fomba feno ny lafiny rehetra mifandraika amin'ny fety ary hitondra anao any amin'ny zoro tsara indrindra.
Amin'ny fotoana ankalazana ny festival Patios de Córdoba, tsingerin'ny fampisehoana vahoaka izay mampivondrona ireo mpihira na mpandihy tsara indrindra any an-toerana. Ary ny fanandramana ny vokatra eo an-toerana koa voalamina, indrindra ny tapas sy ny divay avy amin'ny fanondroana ny fiaviany. Montilla Moriles.
Raha ireo voalohany dia afaka manandrana matsiro ianao Gazpacho, fa koa tsara tarehy Salmorejo, fantsika sombintsombiny na lovia iray an'ny ram. Ity farany dia amboarina ovy misy tongolo gasy nendasina sy mofo voadio izay matetika miaraka amin'ny atody nendasina.
Ary mba hamaranana ny fanandramanao ny gastronomy mahazatra Córdoba dia afaka mankafy vitsivitsy ianao voninkazo nendasina, izay ny anarany dia tena mety amin'ny antoko resahina. Na izany aza, mofomamy lafarinina, atody ary anis no izy. Na azonao atao koa ny misafidy ny mofomamy cordovan, izay vita amin'ny volon'ondry sy ny mofomamy puff.
Patio mandray anjara amin'ny fifaninanana
Ahoana no ahatongavana any Córdoba?
Raha te hankafy ny festival Patios de Córdoba ianao dia mila mahafantatra ny fomba hahatongavana any amin'ilay antsoina hoe Caliphal City. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra anaovana izany dia amin'ny lalamby. Córdoba dia manana tsipika haingam-pandeha izay mampifandray azy amin'ny lamasinina miaraka amin'i Madrid, Barcelona ary ireo tanàna Andalosiana hafa toa an'i Seville, Granada na Malaga.
Mikasika ny dia nataon'i lalambe, liana ianao hahafantatra fa, raha tonga avy any Madrid na Seville ianao, ny làlambe dia Lalam-pirenena atsimo A-4. Na izany aza, raha avy any amin'ny faritra Levantine no anaovanao azy, ohatra avy amin'ny Valencia, ny lalana mety dia misy ny A-3, ny A-43 ary ny A-4 tenany. Farany, raha mandeha avy any andrefana ianao, ny làlana tsara indrindra dia ny National 432.
Ho famaranana, ny Fetin'ny Patiosin'i Córdoba fipoahana hatsarana voajanahary izany. Mahafinaritra ny mahita ireo habaka samihafa voaravaka voninkazo sy firavaka hafa. Raha mandeha mankafy ny tanàna Andalusian ianao hankafy azy dia tsy hanenenanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Cordova » Fetin'ny Patiosin'i Córdoba
Morontsiraka El Cañuelo